Home Wararka Dibada Mareykanka oo Soomaaliya ugu deeqay $55 Milyan si wax loogu qabto Abaaraha
Mareykanka oo Soomaaliya ugu deeqay $55 Milyan si wax loogu qabto Abaaraha
Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda iyo Siyaasadda Maraykanka Victoria Nuland oo shalay soo gaartay Magaalada Muqdisho ayaa kulan la yeelatay Madaxweyanha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulanka Madaxweynaha iyo ku xigeenka xoghaya Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa ay uga wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal, sii amba-qaadidda taageerada dowladda Maraykanka ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan gurmadka abaaraha, dowlad dhiska, horumarinta adeegyada bulshada, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo la dagaallanka argagixisada.
Victoria Nuland oo warbaahinta kula hadashay gudaha xarunta Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya yaa balan qaaday in Dowladda Federaalka ay ka caawineyso garab istaaga xaaladda Abaaraha, gaar ahaan cunnayarida ka jirta Soomaaliya.
“Waxa aan maanta ku dhaawaqayaa 55 Milyan oo doolar, taas uu Mareykanku ugu talo galay in lagu caawiyo cunnayarida ka jirta Soomaaliya” sida ay tiri Victoria Nuland oo ah ku xigeenka Ku xigeenka Arrimaha Dibadda Maraykanka.
Dowladda Mareykan ayaa sanad walba 415 Milyan oo doolar ku bixisa baahiyaha Bani’aadannimada, isaga oo kaalin ka geesta wax ka qabashada xaaladda Abaaraha ee ka jira Geeska Afrika
Previous articleDAAWO:- MUQAAL” DEG DEG Saxiixii 2aad oo Liverpool ayqaadaneyso, Barce & Liva, Djong & kubiiristiisa United
Next articleDiyaaradaha Kenya oo duqeymo ka fuliyay degaano katirsan Gobolka Gedo
DENI IYO XAMAR:Shalay oo uu musharrax ahaa iyo maanta oo...